I-china CY-2 (yangaphakathi yokutyhala kwempahla yokutsala iimpahla) kwendawo yokuhlala yabenzi kunye nabathengisi | Jialong
Ezinzile, ekhuselekileyo, ixesha elide
(Ubungakanani betyhubhu yi-1.0 mm)
Uphawu:Sebenzisa izixhobo zokungenisa elizweni, itekhnoloji ephezulu, imveliso egqwesileyo, emva konyango lwepayipi kunesenzo esomeleleyo sokulwa umhlwa, ukumelana ne-oxidation, unyango lomgangatho webakala lemoto. Umgangatho omkhulu otyebileyo, emva kofakelo, isibiyeli sizinzile ngakumbi kwaye siqinile, ipali yokutyhiliza kunye nokutsala ngokutyibilikayo, kwaye ukuthwala umthwalo we-willow kunamandla. Uyilo lwesangqa esiphindwe kabini senza ukuba imveliso ibe ntle ngakumbi.
Faka:Ukufakwa simahla kwamahala, ukuba nje kukho indawo emiselweyo, isibiyeli sinokuhlengahlengiswa kubude bepali.
Iisiseko:Xa sipakisha iimveliso zethu, siya kuzipakisha kwaye siwahlule ukuze siqiniseke ukuba zinokusiwa zikwimeko entle. Siza kuphinda sikhuphe iimveliso ezonakalisiweyo kwixesha elizayo. Kwingxaki yokufaka, siya kuba nesifundo esineenkcukacha zokufaka. Ukuba kukho imfuneko, sinokucwangcisa iarhente yendawo ukuba ifake kwisiza.
Baninzi abathengi abaya kukhetha iimveliso zethu. Sivelisa izigidi zeemveliso minyaka le. Sinokuqinisekisa umgangatho ngelixa siqinisekisa ubungakanani. Izinga lemfundo lifikelela kuma-98%, kwaye siya kwenza zonke iinkcukacha nayo yonke imveliso ngentliziyo yethu.
Isisombululo:Abanye abathengi banokuba nemibono ethile yokwenza i-hanger ibe ngokwezifiso. Sinokubonelela ngezisombululo ngokwendlela abathengi 'izimvo, kubandakanya inani imingxunya, ulwenziwo umbala isincedisi, kunye nezinye iinkcukacha.
Ityala:Umzekelo, kwimveliso ethunyelwa eVietnam, umthengi usicelile ukuba somise iimpahla ezininzi phantsi komqathango wokuba umbhobho ubuyi-80cm kuphela. Emva kovavanyo oluphindaphindiweyo, sombele imingxunya eyi-12 epalini ukusombulula ingxaki yokuba ipali imfutshane kakhulu ukuba ingomisa iimpahla.
Egqithileyo I-CY-3 (yesiqhelo yangaphakathi yokutyhala yokutsala iimpahla)
Okulandelayo: I-CY-1 (yesiqhelo yangaphandle yokutsala-ukutsala iimpahla kwendawo yokuhlala)